China otomatiki mvura inokonzeresa kutapudza kudzora kwechikafu chemumagaba uye chinwiwa indasitiri Kugadzira uye Fekitori | Shenlong
1. Kudzora kwedu hakuna njodzi:
3. Yakashongedzerwa neplate kupisa exchanger, nzira yekuita mvura haibate nemvura inotonhorera uye chiutsi mune yese maitiro ekudzivirira kusvibiswa kwechipiri kwechikafu
4.Used yakaderera huwandu hwekuita mvura, kunze kwemvura nemvura.
1. Nekupisa kupisa kwekutonhodza, kuita kwemvura hakusanganise nemvura inotonhorera mune yese nzira yekudzivirira kusvibiswa kwechipiri kwechikafu. Uye tambidza nemakemikari ekurapa mvura. Nekudaro inosvika mhedzisiro yekupisa tembiricha sterilization munguva pfupi.
2. Iyo shoma nzira yekuita mvura inogona kukurumidza kutenderera kudziya nekukurumidza kune iyo yekuisa sterilization tembiricha.
3. Yakakwana yekumanikidza kudzora inovimbisa iyo yese yekugadzira maitiro, kudzvinyirira kunoiswa kuchinjika kune shanduko mukati mekunze kumanikidza kwechigadzirwa kurongedza, kuitira kuti mwero wekushomeka kwechigadzirwa kurongedza kusvika padiki. Inonyanya kukodzera kuputira gasi uye mabhodhoro egirazi.
4. Yepamberi uye yakagadzika SIEMENS inodzora sisitimu inovimbisa kuti vatengi vanogona panguva yakakodzera kuwana cheni yekupa munyika kudzikisa nguva yekuzorora.
5.Simbi isina simbi pamusoro petsinga yemuviri inoomeswa nechando kunatsiridza kuomarara kwepasi uye kusagadzikana kwehurosi, kunyanya kushora kukora kweklorini yakawedzerwa mumvura inotonhora.
Yedu Retort / Autoclave inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
Yedu yevatengi kesi
Pashure: Yakatengesa-Yakanyanya Hunhu Hwenyika Mapuraneti Kubika Chisanganiso Cooker Chisanganiso
Zvadaro: Steam sterilization Autoclave Retort yemasardines uye tuna caned chikafu chinodzosera